Amụma ahịa nke 2016 | Martech Zone
Otu ugboro n'afọ m na-agbaji bọọlụ ochie kristal ma kesaa amụma ahịa ole na ole na ọnọdụ m chere ga-adị mkpa maka obere azụmaahịa. N'afọ gara aga, eburu m amụma ịrị elu na mgbasa ozi mmekọrịta, ọrụ gbasaawanye nke ọdịnaya dị ka ngwá ọrụ SEO yana eziokwu ahụ na mmeghachi omume mkpanaka agakwaghị abụ nhọrọ. Can nwere ike ịgụ ahịa m 2015 niile Amụma ma lee otu m si di nso. Mgbe ahụ na-agụ na-ahụ n'elu ọnọdụ na-ekiri na 2016.
Ọdịnaya, Social Media na SEO ahịa amụma
Live mgbasa ozi ọha na eze: Ngwa dị ka Periscope, Meerkat na Facebook Live dị mfe karịa mgbe ọ bụla ịkekọrịta “ihe na-eme ugbu a”. Ọ dịghị mkpa maka ndị dị oké ọnụ video akụrụngwa ma ọ bụ cumbersome ndụ gụgharia ngwa. Niile ị chọrọ bụ a smart ekwentị na internet ma ọ bụ cell njikọ na ị nwere ike ohuru ihe ọ bụla, n'oge ọ bụla. Ikike ibi ndu ohuru site na mmemme, mkparịta ụka gị na onye ahịa nwere obi ụtọ ma ọ bụ ngosipụta ngwa ngwa dị na akpa gị. Ọbụghị naanị na vidiyo dị mfe iji, mana ọnụọgụ gbasara njikọ na ịkekọrịta dị oke elu karịa foto dị mfe. Ọ bụrụ na ịchọrọ ka achọpụta na 2016 ị ga-achọ vidiyo iji mee nke ahụ.
Zụta ugbu a, ugbu a, ugbu a!: N'afọ gara aga, ndị ọchụnta ego chere na ọ bụ iji kpọsaa na nyiwe mmekọrịta ka ha hụrụ ndapụta ahịhịa. Iji mee ka mgbasa ozi na-adọrọ mmasị karị, mgbakwunye nke atụmatụ "ịzụta ugbu a" na Facebook na Pinterest ga-agbanwe mgbasa ozi ọha na eze site na ụlọ mmata na ahịa na-eweta. Ka nke a na-ejide, m na-atụ anya na usoro ntanetị ga-eso.
Inweta ọdịnaya gị gụọ: N'afọ gara aga, anyị kwuru goodbye na ụlọ njikọ njikọta na usoro ntinye okwu. Ozi ọma ahụ - Nke a mere ka ịgbanwee ọdịnaya dị ka isi nke atụmatụ SEO dị irè. Akụkọ ọjọọ: Ngabiga nke ọdịnaya na ibe weebụ na ebe nrụọrụ weebụ na-elekọta mmadụ emeela ka o sie ike karịa ka achọpụtara. Na ụlọ ọrụ 2016 na-aga nke ọma ga-elekwasị anya na usoro nkesa ha, na-enweta ọdịnaya ha n'ihu ndị ziri ezi site na nkwukọrịta ozi-e ezubere iche na ndị otu na-elekọta mmadụ. .
Web Design Marketing amụma
Ekele sidebar: Ozugbo otu njirimara nke weebụsaịtị ọ bụla, ha na-ada ngwa ngwa n'ihi na ha anaghị arụ ọrụ nke ọma na gburugburu ebe obibi. Ozi dị oke egwu na sidebar dara na ala nke ibe na ngwaọrụ mkpanaka na-eme ka ha bụrụ ihe na-abaghị uru dị ka ebe obibi maka ụdị oku ọ bụla na-eme ihe.
Modular imewe: Chee echiche banyere sofa modulu. You nwere ike ịhazi iberibe ahụ iji mepụta ihe ndina ma ọ bụ oche ịhụnanya na oche dị iche. N'iji otutu ihe eji emeputa ihe (tinyere Divvy site na Gburugburu Gburugburu), ndị mmepe web nwere ike iru peeji nke bụ n'ezie usoro modulu dị iche iche emere iji mezuo ebumnuche. Usoro modular a na-atọhapụ ndị na-emepụta weebụ na mgbochi nke otu isiokwu. Peeji ọ bụla nwere ike ịdị iche kpamkpam. Na-atụ anya ịhụ ka esi eji usoro ndị a eme ihe karịa na 2016.
Ọ bụghị etu a ka ọ dị: Maka afọ ole na ole gara aga, obere ọchịchị achịla. Atụmatụ ndị dị mfe, na-enweghị onyinyo ma ọ bụ ihe ndị ọzọ nke nyere ihe omimi omimi na akụkụ ha n'ihi na ha gbanye ngwa ngwa na ụdị ngwaọrụ ọ bụla. Agbanyeghị teknụzụ na - emeziwanye ma Apple na Androids na - akwado ihe gbanwere, ọkara dị larịị. Dị ka ụdị a na-abanye n'ime mkpanaka ọ ga-arụ ọrụ ọ ga-alaghachi n'ime ntanetị weebụ. Anaghị m atụ anya na anyị ga-ahụ nloghachi na ndò ndo ma ọ bụ mmiri mmiri na-ewu ewu afọ iri gara aga, mana anyị nwere ike ile anya n'atụmatụ ịba ọgaranya na 2016.
Ngwaọrụ na-agwa ibe ha okwu: Echere m na ịkwaga na mmekọrịta mmekọrịta ga-ejide ngwa ngwa karịa ka ọ mere ka m wee nwee ike ịkwaga amụma a banyere IoT (Intanet nke Ihe) site na 2015 ruo 2016. IoT bụ ngwa nke na-enye ohere nkwukọrịta n'etiti ngwaọrụ na / ma ọ bụ n'etiti ngwaọrụ na ụmụ mmadụ. Dịka ọmụmaatụ, igwe elektrọnik amamịghe emere n'ime ụgbọ ala gị na-agwa gị mgbe nrụgide taya gị dị ala ma ọ bụ na ọ bụ oge ịgbanwe mmanụ gị. Fitbit m na-arụ ọrụ na ekwentị m nke na-eme ka m mara mgbe m rutere nso ihe mgbaru ọsọ m kwa ụbọchị. Ọ bụrụ na smart ngwaọrụ nwere ike izipu mata na ngwaọrụ ndị ọzọ ọ bụ naanị ezi uche ha ga-amalite izipu ndị ahịa na ndị na-enye ọrụ ozi ozi. Furnlọ ọkụ gị nwere ike ime ka onye ọrụ HVAC gị mara mgbe ọ dị mkpa ka arụ ọrụ ya, ma ọ bụ friji gị nwere ike ịhazigharị mmiri ara ehi mgbe shelf adịghị efu. Na 2016 a ga-enwe ngwa ndị ọzọ nke ga-eme ka ndị ahịa gị debanye aha maka ihe ncheta na ọkwa maka ụdị ngwaahịa na ọrụ niile
Anyị nwere mmasị na ọnọdụ mgbe niile, ọkachasị n'etiti ndị nwere obere azụmaahịa (ụlọ ọrụ nwere ihe na-erughị ndị ọrụ 100). Ọ bụrụ na nke ahụ dị ka gị, ị ga-ewe nkeji ole na ole iji mezue nyocha anyị na-eme kwa afọ?
Tags: marketingngwa ahia